UMagic Handz owaziwa ngelikaDlala Thukzin | Scrolla Izindaba
UMagic Handz owaziwa ngelikaDlala Thukzin
“Dlala Thukzin” akugcini nje kuphela ngokuba yigama lesiteji somculi – noma lo muntu osemqoka ezingomeni eziningi zeGqom eziculwa ngabaculi abafana noMampintsha, uDJ Tira, noBabes Wodumo.
Igama lakhe seliphenduke igama eliyisiqalo emakilabhini amaningi kuleli. Lapho abantu belizwa ezingomeni zakhe bayazi ukuthi usezoshayela izihlwele izingoma ezimnandi ngamakhono akhe e-Djing.
Igama eligcwele likaThukzin nguThuthuka Zindlovu futhi ungowase-Lamontville eningizimu yeTheku.
Enye yengoma yakhe yakamuva ehamba phambili iNika Nika lapho adlala khona no-Iso noCavaTheKwaal.
Eminyakeni engaphezu kwemine engene ezingeni eliphezulu lomculo , usathola ukusabela okufanayo akuthola kwenye yengoma yakhe yokuqala ethi ‘Nab Laba’ noDladla Mshinqisi noZulu Mkhathini.
“UMagic Handz” njengoba ethanda ukubizwa kanjalo esikhundleni sokuthi abe ngumkhiqizi nje ‘weGqom’ uqale ukuba nguDJ nomalume wakhe eneminyaka eyi-12 eThekwini. Futhi ukusuka lapho ukhule waba ngumculi owaziwa yiwo wonke umuntu futhi othandwayo.
Uzimisele ngokushiya ifa elihlala njalo. Iminembe yekhono lakhe ibonakala kwelinye lama-albhamu amakhulu eGqom ezweni yindlovukazi yalolu hlobo, uBabes Wodumo, naye odabuka e-Lamontville – esihloko sithi Gqom Queen Volume 1 ngowezi-2016.
I-albhamu yakhe i-Permanent Music izohlala isikhathi eside nengoma yayo iNika Nika ebukwe ngabantu abangaphezu kwabayi-700,000 ku-YouTube.
Umthombo Womsindo: YouTube